Beanbag သဘာပတိ PDF ကိုစံနမူနာ - အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / ပရိဘောဂ / အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ / Beanbag သဘာပတိ PDF ကိုစံနမူနာ
SKU: BeChPDPa categories: ပရိဘောဂ, အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ Tags:: beanbag, chair, ကလေးများ, အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ, furnshings
LARGE: Copyshop အရွယ်အစား: 129cm x 196cm / A4 စာမကျြနှာ: 56 / အမေရိကန်ပေးစာ: 56
အလယ်အလတ်: Copyshop အရွယ်အစား: 100cm x 140cm / A4 Pages: 36 / အမေရိကန်ပေးစာ: 30
SMALL: Copyshop အရွယ်အစား: 87cm x 110cm / A4 Pages: 20 / အမေရိကန်ပေးစာ: 25
XSMALL: Copyshop အရွယ်အစား: 83စင်တီမီတာက x 58cm / A4 စာမကျြနှာ: 15 / အမေရိကန်ပေးစာ: 15
Cut out all pieces. Begin by folding the darts in the Top Back piece. pin နှင့်ချုပ်.
Take the top seat pieces that were previously joined and carefully pin them in place onto the lower part. ချုပ်.
အဆိုပါဝယ်ယူ Beanbag သဘာပတိ PDF ဖိုင်ရယူရန်အပ်ချုပ်စ​​ံနမူနာ
£ 2.07 စျေးဝယ်ခြင်းထဲသို့ထည့်သည်
£ 4.60 ရွေးချယ်မှုများကို Select လုပ်ပါ